Indawo yokuhlala yaseAurora enombono wolwandle - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yaseAurora enombono wolwandle
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguJill
I-Aurora Apartments yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala ixesha elifutshane okanye ixesha elide kude nekhaya ngaphandle kokuphoswa ukuze uzive ngathi ulikhaya! Izindlu ezimbini ezinamagumbi amabini zinika indawo eyaneleyo yabantu abangama-4-6 kumagumbi amabini okulala ahlukeneyo, zombini enombono wolwandle!
Indlu nganye inegumbi lokuhlambela, ikhitshi elivulekileyo lokuhlala kunye neveranda ebanzi ejikeleze indlu apho onke amagumbi anokufikelela kuyo! Eyona nto ibhetele kunye nemigangatho ikhuselekile ngamagumbi ane-air-conditioning kunye neendawo zokuhlala, ukufikelela kwi-Wi-Fi kunye nenkonzo yebreakfast!
Ngaphezu koko, kukho isicakakazi emini esihlamba impahla, kunye nomntu ophetheyo kuyo nayiphi na eminye imiba enokubuzwa nokusombulula. Kungoko, iindlela ezimfutshane, umzekelo ukuya emarikeni ngenkxaso yasekhaya zinokucwangciswa kunye nemisebenzi ekhoyo edolophini.
I-Vilankulo idume nge-snorkel yayo okanye uhambo lokuntywila kwindawo eyaziwa ngokuba yi-Two Mile Reef ye-Bazaruto Arquipelago, eneentlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo zaselwandle. Ngaphaya koko mininzi imisebenzi yasemanzini, enje ngekite-surfing, ukuma ukubheqa kunye nokuhamba ngephenyane okukhoyo kwaye kulula kakhulu ukwenza phambi kwamagumbi okuhlala!
Ngemizuzu nje emibini uhamba phezu kwendunduma encinci ufikelela elunxwemeni, apho umenywa ukuba uphumle nje, uhambe umgama omde okanye uthenge intlanzi entsha ekulotyweni kosuku lwabalobi bendawo bakuba bebuyile elwandle.
Ngubani onomdla wokuhlola ubomi bendawo kunye neendawo ezingqongileyo zaseVilankulo akufanele ziphuthelwe ukutyelela imarike yendawo, indawo yaseChibuene kunye neendunduma ezibomvu, ezinikezela ngeyona mbono imnandi kakhulu kwilizwe kunye neziqithi. Ayinamsebenzi nokuba ukhetha ukukhwela ihashe, uhambe nge-quad bike okanye i-4x4, thatha i-how yesintu okanye isantya ngephenyane elinemoto - uhambo nje oluncinci oluphuma eVilankulo lufanelekile!
I am Jill and like to travel to discover new cultures and perspectives of life!
Ndiza kuba lapho kwaye ndiza kuhlala ndinxibelelana nawe xa kukho nayiphi na imibuzo!